Madaxwayne Shariif oo u waramay BBC - BBC Somali
Madaxwayne Shariif oo u waramay BBC
Image caption Madaxwaynaha dowladda ku meelgaarka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha somalia shariif sh ahmed ayaa maanta BBC uga waramay go'aanada shirkii madaxda IGAD ay 7aadkan ku gaareen addis abeba ee ahaa in ciidamo kale loo diro Soomaaliya.
Wariyaha BBCda Moallimo oo madaxweynaha ku wareystay xafiiska madaxtooyada ayaa marka hore wuxuu waydiiyey faahfaahin inuu ka bixiyo ciidamada la sheegay in uu ka dalbaday madaxweyne Shariif dalalka IGAD ?
Madaxwaynaha, ayaa sheegay in ciidamada lagu kordhinayo kuwa AMISOM ilaa 2 kun oo ka mid ah ay ka iman doonaan dalalka Uganda iyo Burundi, halka hadii loo baahdo 12 kun oo kale oo ciidamo ah laga keeni doono dalalka Africa.
Anaga waxa aan wax ka dalbannay waa IGAD, waa midowga Africa Ethiopia waa run, waa is dirirnay, laakiin waa heshiinay, waa dal aan deris nahay, in maanta dowladda Soomaaliyeed gacan laga siiyo sidii ay nabad ku keeni lahayd, ciidankeeda loo dhisi lahaa, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo Soomaalidana muhiim u ah deriskana muhiim u ah
Madaxwayne Sheekh Shariif
Madaxwaynaha, ayaa sheegay sababta ay ciidamada u dalbadeen ay tahay, in kooxaha dagaalamaya loo bandhigay heshiis nooc walba. ma suuragalayso in ay argagixiso soo uruuriyaan maalin kasta, ayuu yiri ma aha wax la aqbali karo. Tallaabada argagixisnimada ayuu ku tilmaamay mid halis ku ah deriska iyo dowladda ku meelgaarka ahba.
Waxaa uu sheegay in wixii la rabay lagu guulaystay oo qorshuhu yahay in aysan fashilmin waxa yar ee jira. wuxuu eedda saaray dad uu sheegay in maalin walba ay ajaanib soo galinayaa dalka. wuxuu madaxwaynuhu sheegay in ay ogol yihiin in diinta Islaamka lagu xukumo dalka.
Waraysiga madaxwaynaha oo faahfaahinta, waxaad ka dhagaysan kartaa maqalka ku lifaaqan warbxintan.